ဒါဟာပဋိပက္ခအခြေအနေများကိုရှောင်ရှားရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ ပြည်သူ့အများကြီးထင်မြင်ချက်များ။ သင်တို့၏အကြံအစည်, အသိပညာနဲ့အတှေ့အကွုံမျှဝေခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့တင်ပါတယ်၏အမြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်မကြာခဏဆန့်ကျင်ဘက်, သူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်များ၏အခြေခံပေါ်မှာ, ငြင်းခုန်ရန်, ဒါပေမယ့်လည်းနားထောင်ဖို့မသာရသည်။ အကျိုးစီးပွားကိုတိုက်ဆိုင်ကြဘူးသောအခါ, ပဋိပက္ခရှိသေး၏။
ပဋိပက္ခများကိုအမြဲအဖျက်မရှိကြပေ။ အလွန်မကြာခဏပဋိပက္ခအခြေအနေမှာအမှန်တရားမွေးဖွားသည်။ ပြဿနာတစ်ခုကိုပိုမိုမှန်ကန်သောနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြေရှင်းချက်ကိုလည်းပဋိပက္ခအခြေအနေကိုဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးနောက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ပဋိပက္ခ၏အပြုသဘောဆောင်သို့မဟုတ်အဖျက်သဘောသဘာဒီပဋိပက္ခဖြေရှင်းသင့်ရဲ့ရှေးခယျြသောနည်းလမ်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်ထားသည်။
ဘယ်အချိန်မှာတစ်ဦးတည်းသောကြောင့်မည်သည့်အခါသမယတစ်ခုပြည်တွင်းရေးဆန့်ကျင်ပါလိမ့်မယ်။ မကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ငါတို့သည်အဘယ်အရာတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြဘူးသောအခါ, အဖြစ်မှန်မှာငါတို့မသိစိတ်တစ်ပိုင်းအတွက် intrapersonal ပဋိပက္ခပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအတွင်းပိုင်းအပေါ်သွားမယ့်ပဋိပက္ခငါတို့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မသိစိတ်တစ်ပိုင်းအတွင်းပိုင်းရှိလျက်ရှိ၏။ intrapersonal ပဋိပက္ခများကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများကိုအဓိကအားအခြေအနေကိုတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်မငြိမ်သက်မှု၏အကြောင်းတရားများခွဲခြားသတ်မှတ်နေကြသည်။ ထိုပြဿနာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု - သင်အနှောက်အယှက်ရဲ့အရာကိုရေးသားထားသောအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လူအပေါင်းတို့သည်ပစ္စည်းများစာရင်းနှင့်ဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ပြီးနောက်, သင်ပြီးသားမျက်နှာ၌သင်၏ "ရန်သူ" သိပါလိမ့်မယ်။
အခုတော့ပဋိပက္ခ vnturilinostnymi နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်များ၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံးနည်းလမ်းများစဉ်းစားပါ။
ဧည့်ခံ "လာမယ့်အဘယ်သို့နည်း" သင်ရေးသားခဲ့ရာမှဖတ်ရှုပါ။ စိတ်ပိုင်းသို့မဟုတ်ကျယ်လောင်စွာတစ်ဦးချင်းစီကို item သင် Reading, ကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးခွန်းမေးဖို့: "ဘယျလာမယ့်" ။ သင့်ရဲ့စိတ်ကိုမေးခွန်းများကိုဝိရောဓိအတွက်ပေါ်ပေါက်သစ်ကိုမှဤမေးခွန်းကိုမေးပါ, အဖြေစောင့်ဆိုင်းရန်တာရှည်မယူကြဘူး။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်၏အဖြေကိုအောက်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပေအဖြစ်ကွင်းဆက် Continue: "! Oh, ဘာမျှမ" ။ ရုံ '' ဘာမျှမ '' ဒါကြောင့်ဘာမျှစိုးရိမ်ရန်ထိုက်တန်ပါသလဲ အားလုံးကိစ္စမောပါပဲ။ မကြာခဏကျနော်တို့ molehills ထဲကသူတို့ပြောသည်အတိုင်းပြုပါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာများကိုချဲ့ကား။
ပြောင်းခြင်းသဘောထားတွေ။ သငျသညျအခွအေနကိုပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါဖြစ်ရပ်မှာတော့ပြဿနာကသူတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြိုးစား, ကိုယ့်ကိုယ် castigate မှဆောတလျင်မပါဘူး။ အပြုသဘောရှုထောင့်အမြင်များ၏အချက်အနေဖြင့်အခြေအနေကအကဲဖြတ်ရန်, ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိတယ်, ငါ့ကိုယုံကြည်ကြသည်။ သငျသညျထိုပြဿနာမှသဘောထားပြောင်းလဲသွားပြီးနောက်, သငျသညျစိတ်သက်သာရာခံစားရပါလိမ့်မယ်, မကြာမီထိုပြဿနာကိုလုံးဝသူ့ဟာသူကုန်။
intrapersonal ပဋိပက္ခ၏ပေါ်ပေါက်ရေးကျန်းမာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်ကိုဆုံးရှုံး။ အကြောင်းရင်းဖြေရှင်းပြီးသည်အထိစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့်, အခြားအရာတစ်ခုခုရဲ့မဖြေရှင်းနိုင်ကိစ္စကိုပယ်ဖျက်အစားထိုးသို့မဟုတ်အစားထိုးလူနာအကြောင်းကိုမစဉ်းစားဖို့ကြိုးစားနေမဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြောင်းရန်ကြိုးစားနေ - ကထိရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ခဏသင်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းမေ့လျော့။ ပဋိပက္ခ၏အကြောင်းရင်းမဖြေရှင်းနိုင်ရှိနေဆဲအဖြစ်ဒါပေမယ့်, ကြာရှည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တိုက်ခိုက် - အကောင်းဆုံးကာကွယ်ရေးပြေး, မကြောက်ပါနဲ့မထားပါနဲ့။
အလုပ်မှာ, အိမ်မှာ, ကွာ - ငါတို့သည်လူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ရှိသည်နေရာတိုင်းမှာအငြင်းပွားမှုများနှင့်ပဋိပက္ခများရှိပါတယ်။ ဒါကပုံမှန်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သဘာဝပါပဲ။ လူ့ပဋိပက္ခများ, တစ်ဦးချင်းစီအကြားဆိုလိုသည်မှာပဋိပက္ခများကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတဦးတည်းက၎င်း၏အခြေခံမူ, ဒီပြဿနာဖြေရှင်းနည်းများ၏သဘောသဘာဝနှင့်အရေးပါမှုနှင့်အတူပါဆုံးတသမတ်တည်းဖြစ်သောအပြုအမူအမျိုးအစားကိုရွေးယူ။
ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရန်အရှိဆုံးအပြုသဘောဆောင်တဲ့လမ်းတစ်အပေးအယူဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပဋိပက္ခဖြစ်နှစ်ဖက်အသီးအသီးအဘို့တစ်ဦးထက်ပိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းလက်ခံနိုင်ဖွယ်အခြေအနေများအတွက်ပြဿနာဖြေရှင်း။ ဤတွင်အချို့သောအတိုင်းအတာအတွက်နှစ်ဦးစလုံးအနိုင်ရ။
မဟုတ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း - ပဋိပက္ခများကို Evading သို့မဟုတ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း။ ထိုသို့သောအပြုအမူအချိန်ဗုံးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကပွင့်လင်းပဋိပက္ခရှောင်ရှားအဖြစ်, သင်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စိတ်ပျက်အားငယ်စုပြုံပါလိမ့်မယ်။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုအနာဂတျမှာက intrapersonal ပဋိပက္ခသို့ကြီးထွားမည်ကိုဖြစ်ကြသည်။ သင်ကသင့်သလဲ အဲဒါကိုဖြစ်ပေါ်အဖြစ်ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်း။
ပဋိပက္ခဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုအချို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာ သငျသညျက၎င်း၏အနေအထားနှင့်၎င်း၏အကြောင်းတရားများ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့မျှတမှုပေးရမည်။ ဒုတိယအကြောင့်နားထောင်ရန်နှင့်ပဋိပက္ခဖြေရှင်းများ၏ရွေးချယ်မှုများထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကြိုးစားနိုင်သည့်တင်ပါတယ်၏အမြင်, လေးစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ တဦးတည်းကို, သူတို့ကပြောပါသည်အတိုင်း, ကောင်းသော, သို့သော်နှစ်ခု - ကောင်း၏။
မိသားစုပဋိပက္ခများကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများဘုံရည်မှန်းချက်ပေါ်အခြေခံပြီးရပါမည် - တစ်ဦးသည်မင်္ဂလာလက်ထပ်ထိမ်းမြားဖန်တီးခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်း။ အိမ်ထောင်မှာမရှိခေါင်းဆောင်လည်းမရှိမရှိဆုရရှိသူသို့မဟုတ်အရှုံးသမားရှိပါတယ်။ သငျသညျ - အသင်းနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လျှင်, နှစ်ဦးစလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ထိုသို့မိသားစု "အေး" ၌အဘယ်သူသည်သင်တို့တွင်နှစ်ခုထဲကရှာတွေ့နိုင်ရန်အတွက်တိုက်ပွဲတွေလည်းစီစဉ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အတူတူနဲ့တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်, သင်ရှင်သန်ရန်လိုအပ်ယခုပြီးတော့အရာ၌သင်အသက်တာ၏အခွအေန - သင်၏နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့ပူးတွဲ "ရည်မှန်းချက်များ" သတ်ထားတဲ့အတွက်တစ်ဦးတည်းသာရည်မှန်းချက်, မြို့တံခါးဝရှိသည်။ တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအကြောင်းကို - ထိုကြောင့်, ပဋိပက္ခများဖြေရှင်းရေး, အဓိကအရာသတိရပါ။
စင်ကြယ် slate နှင့်အတူတစ်ဦးအသက်တာသစ်ကိုစတင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ခြောကျခြားဖွစျပွီး psychopathy ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး - ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသရေး
ဘာလုပ်ရမှန်းခင်ပွန်းအချိုရည်, - စိတ်ပညာရှင်ဘုတ်အဖွဲ့
ကလေးတွေတစ်စမတ်လက်ပတ်နာရီကို set up လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကလေးများအတွက်ပိတ်ဆို့ခြင်းချောင်းဆိုးရင်ကျပ် - ရောဂါလက္ခဏာ
Corduroys ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
ကွာရှင်း Gwen Stefanie
ကျနော်တို့နောက်ဆက်တွဲခေါ်ဆောင်သွားဒရာမာ "မီးခိုးရောင် 50 အရိပ်" ရိုက်ကူးစတင်
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ osteochondrosis - အိမ်မှာရောဂါလက္ခဏာနှင့်ကုသမှု
အသား multivarka နှင့်အတူ Braised ဂေါ်ဖီထုပ်
ဆံပင်ကျွတ် - အသုံးအများဆုံးအကြောင်းရင်းများနှင့်ထိရောက်သောကုသမှု